समय आयो, ढोरपाटन जाने हो कि ? – केबी मसाल
समय आयो, ढोरपाटन जाने हो कि ?
February 20, 2014 KB Mashal 1 Comment
हामी नेपालीहरु अरुको मात्रा राम्रो मान्दछौ । पोशाक, घर, गाउँ, शहर आफ्नोभन्दा अरुको राम्रो देखिने बानि परेका छौं । सम्म मैदानी स्थान, मोटर गाडीको सुविधा, ठूला शहरवजार घुम्ने बानी परेका हामि नेपाली । आफ्नै देशको प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न भने पछाडि परेका छौ । समुन्द्र पारका युरोपियनहरु हाम्रो भूमीमा आएर ढोरपाटन जस्ता दर्जनौ हिमाल र प्रकृतिका आनन्दमा रमाउँछन् । त्यहाँको फोटो आफ्नो देशमा लगेर बेच्दछन् । त्यहाँको प्राकृतिक अध्ययन र अनुसन्धानबाट कितावहरु लेख्दछन् । कयौ संसारमा नपाइने जडिबुटि र बन्यजन्तुका बारेमा अध्ययन गर्दछन् । खै त हामिले गर्न सकेको ?
ढोरापाटन बाग्लुङ, म्याग्दि र रुकुम जिल्ला गरी तिन जिल्लाको भुगोलमा फैलिएको हिमाली श्रृङ्खला हो । ढोरपाटन शिकार आरक्षणले कुल १ हजार ३ सय २५ बर्ग किलोमिटर भुभागको क्षेत्रफल ओगटेको छ । धौलागिरी हिम श्रृङ्खलाको सेरोफेरोमा यो आरक्षणले प्रत्येक बर्ष हजारौ पर्यटकलाई आकर्षण गराएको छ । नेपालभित्र रहेका कुल १५ आरक्षणमध्ये ढोरपाटन आरक्षणको प्राकृतिक बनावट र त्यसभित्र रहेका जैविक विविधता, ३२ जातिका स्तनधारी बन्यजन्तु, १ सय ३० जातिका चराचुरुङ्गिहरु, १ सय ८५ जातका दुर्लभ बनस्पति तथा जनावर, झारल, हिमचितुवा, घोरल, बदेल, भालु, हिमलँगुर बादर, हिमाली कालो भालु, भुक्ने मृग आदि जनावरको दृश्यावलोकन ढोरापाटन आरक्षणमा गर्न सकिन्छ ।
पुथा, चुरेन र गुर्जा हिमालको काखमा रहेको ढोरपाटन सामुन्द्रिक सतहबाट २ हजार ८ सय ५० मिटरदेखि पाँच हजार पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ । लालि गुराँसको फुलले सजावट हुने चैत्र, बैशाख महिनामा गोवे्रसल्ला, भोजपत्र, ठिँगे्र सल्ला, सिदुर र धुपि सल्ला र देवदारका बनस्पतिले ढोरापाटन सजावट भएको छ । प्राकृतिक आनन्द लिन हिमालि भागको दृश्यावलोकन र बन्यजन्तु सिकारको रोमाञ्च अनुभुति लिन चाहनेका लागि ढोरपाटन एकमात्र आरक्षण मानिन्छ । त्यहाँ पुग्ने विदेशि अथवा स्वदेशि कुनै पनि पर्यटकहरुलाई त्यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सजावटले जो कोहिलाई पनि मनमुग्ध बनाउँछ ।
ढोरपाटनमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विदेशि पर्यटकहरुमा अमेरीकी, फ्रान्सेली, स्पेनी, बेलायती र रुसी नागरीकहरु सिकार खेल्न जाने गर्दछन् । काठमान्डौबाट टुइनेटर अथवा हेलिकप्टरको हवाई उडानबाट पनि ढोरपाटन पुग्न सकिन्छ । अथवा पोखरा–वाग्लुङ् ७२ कि.मि.को यात्रा पछि वाग्लुङ् वजार पुगिन्छ । बाग्लुङवजारबाट ९० कि.मी को मोटर मार्ग पार गरेपछि ढोरपाटन जाने मार्गमा पर्ने वाग्लुङ्को वुर्तिवाङ् पुग्न सकिन्छ । बुर्तिबाङबाट अधिकारी चोक र वोवाङको बाटो हँुदै एक दिनको पैदल यात्रामा ढोरपाटन पुग्न सकिन्छ । ढोरपाटनमा बन्यजन्तुको सिकार खेल्न नेपाल सरकारले सशुल्क अनुमति दिने गरेको छ । विदेश पर्यटकहरुलाई दुर्लभ मानिने निलो नाउर सिकार खेल्न ८० हजार र नेपालि नागरीकका लागि जनावर हेरी कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्दछ ।
ढोरपाटनको दक्षिणपट्टी रहेको रुद्र तालको पानी गुल्मी जिल्लाको रुद्रवेनीमा पुगेपछि कालिगण्डकीमा मिसिन्छ । ढोरपाटन क्षेत्रमा झनु ताल पनि छ । त्यस तालको पानि बडिगाडको नामले कालिगण्डकीमा नै मिसिन्छ । वरीपरी हिमालि दृष्य हिमालको काखमा राता डाँडा त्यसमुनि हरीयो जंगल, जंगलमुनि मैदानि भाग अनि बस्ति र कञ्चन पानिका स्वच्छ नदीको प्राकृतिक उत्तम उपहार हो ढोरपाटन । ढोरपाटनको अर्थ फराकिलो ठाउँ हो । ढोरपाटनके अर्को नाम हो बादलपारीको गाउँ ।
ढोरपाटनको उत्तरतर्फको गर्पा डाँडाबाट कास्कि, म्याग्दि, बाग्लुङ, गुल्मि, पाल्पा, रुकुम आदि जिल्लाका धेरै भुभाग देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी उत्तर तर्फका हिमाल, चुरेन पुठा, हिमचुलि, गुर्जा हिमाल, सिस्ने हिमाल, धौलागिरी हिमाल, माछापुच्छे्र, निल गिरी, अन्नपुर्ण हिमाल एकै ठाउँबाट देख्न सकिन्छ । ढोरपाटन क्षेत्रमा हिमाल मात्र होइन पार्मी ताल, मान्द्रे ताल, जाल्पा ताल, पुठाताल र रुरु तालले पनि पर्यटकहरुलाई मनमोहक बनाउँछ । ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकहरुले धेरै प्राकृतिक विविधताको अध्ययन गर्न पाउँछन् । प्राकृतिक दृष्यवलोकनका लागि मनोरम मानिने ढोरपाटन एकपटक जान सके राम्रो हुन्छ ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षणको पाटन क्षेत्रमा हरेको उत्तरगंगा नदीको शिरबिन्दुमा उत्तरगंगा धारा रहेका छन् । उक्त ठाउँमा २२ ओटा बाह्रै मास पानी आउने धारा छन् । ती २२ धारामा नुहाएर नजिकैको ढोरबराही मन्दिरमा पूजा गरेमा सबै मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । ढोरबराही मन्दिरमा प्रत्येक बर्ष जनैपूणर््िामाको अवसरमा विशेष मेला लाग्छ । ढोरपाटनमा तिब्बतियन क्याम्पसमेत रहेको छ । ढोरपाटन क्षेत्रमा जातीय र सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ । विश्वकमार्, मगर, नौथर, छन्त्यालजस्ता पिछडिएका नेपाली समुदाय र तिब्बती शरणार्थीको जीवनशैली फरकफरक रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा जाने जोसुकैले यहाँको विविध रहनसहन अवलोकन गरेर आनन्द लिने गर्छन् ।
ढोरपाटन वाग्लुङ् जिल्लाबाट जाँदा समयले भ्याएमा वाग्लुङ् जिल्लाको पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ । नेपालभित्र पनि नेपाल अर्थात नेपाल जस्तै स्यानो नक्सा भएको जिल्ला हो वाग्लुङ । नेपालको झोलुङ्ेपुलको तथ्याक अनुसार सवैभन्दा धेरै झोलुङ्ेपुल भएको जिल्ला पनि वाग्लुङ हो । त्यसैले वाग्लुङ लाई पुलै–पुलको जिल्ला भनेर पनि चिन्हे गरिन्छ । पाल्पाका राजा मुकुन्दसेन ले आफ्नो छोरीलाई उपहार दिएको मूर्ती वाग्लुङ वजारको प्रख्यात कालीकादेवी को मन्दिर हो । सोह््र हजार पर्वतको नामबाट पनि प्रसिद्ध, गल्कोट, विहुँकोट, संसारकोट, अर्नाकोट र माझकोट जस्ता ऐतिहासिक कोटका राज्य भएको क्षेत्रको पनि अध्ययन भ्रमण गर्न सकिन्छ ।
गमीण क्षेत्रमा बोलीने मिठो स्थानीय भाषाको माध्यमबाट पाहुनाहरुको स्वागत गर्नमा पछि पर्दैनन् दुरदराजका मानिसह्रु । वाग्लुङ पुग्ने मानिसहरुले क्हिल्यै नसुनेको स्थानीय भाषाको स्वर भैच्च, खाइच्च, भनिच्च, हनत भन्ने जस्ता धेरै नयाा स्थानीय भाषाको श्रवण गर्न सक्दछन् । मानिसहरुको बोली र ब्यवहारले कुनै पनि वाग्लुङ् जाने नयाँ अनुहारलाई असजिलो हुँदैन । ग्रामीण विकाससंगै आजभोलि वाग्लुङमा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ब्यापारी केन्द्रहरुको संख्या बढेको छ । पुरानो वुर्तिवाङ वजार बिस्तार भएको छ । सडक यातायातले छोएका दुर राजका वस्तीमा समेत व्यापारी कारोवार बढदै गएको छ । वाग्लुङ् जिल्लाको ग्रामीण वजारको मागलाई आपुर्ती र पर्यटकहरुलाई खानावस्नको सुविधा भएको छ । आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकहरुको लागी वाग्लुङ् जिल्लाबाट धौलागिरी, माच्छापुछ«े जस्ता प्राकृतिक दृष्यले मनमोहक बनाउने हिमाल देखिए पनि वाग्लुङ जिल्लामा भने हिमाल छैन ।
मिति २०७० फागुन १२ दाङ्
← देवघाट देखि मुक्तिनाथ सम्म ….१६
दहको वाह्र कुना अव कथा बनेको छ →
One thought on “समय आयो, ढोरपाटन जाने हो कि ?”
ढोरपाटनका बारेमा लेखिनु नै सकारात्मक कुरा हो । तपाई त्यही जन्मेर अलि टाढा कतै बसोवास गरिरहनु भई ढोरपाटनलाई माया गर्ने मानिस हुनुहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका बारेमा लेखिँदा यसको उच्च सम्मान थपियोस भन्ने मेरो कामना छ !!!
LeaveaReply to ढोरपाटन पोलिक्लिनिक Cancel reply